विश्वकपमा भारत र पकिस्तानका दर्शकको यस्तो हर्कत - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकपमा भारत र पकिस्तानका दर्शकको यस्तो हर्कत
२०७६, ५ असार बिहीबार
काठमाडौँ, असार ५ । विश्वकप क्रिकेटमा भारतीय र पाकिस्तानी दर्शकहरूले विपक्षी टीमका खेलाडीहरूलाई हैरान पार्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । मैदानमा उल्लेखनीय संख्यामा उपस्थित रहने यीई दुई देशका दर्शकहरूको क्रिकेट प्रेम त चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ नै तर उनीहरूले विपक्षी टीमका खेलाडीहरूप्रति गर्ने ‘हुटिङ्’ समेत चर्चाको विषय बन्न थालेको छ ।
टिकट खरिदमै अगाडि
विश्वकप को टिकट खरिद गर्ने दौडमा भारतीय र पाकिस्तानी फ्यानहरू अगाडि रहेको बताइएको छ । दुई देशबीच भएको पछिल्लो खेलमा ६७ प्रतिशत भारतीय र १७ प्रतिशत पाकिस्तानी दर्शकहरूले खरिद गरेको बताइएको छ ।
दुई देशबीच १६ जुनका दिन भएको खेलको टिकट अन्तिम समयको मूल्य ६ हजार डलर रहेको बताइएको छ । आइसीसी स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले ओल्ड ट्रयाफोर्ड मैदानमा खेलिएको उक्त खेलमा २६ हजार जना दर्शक क्षमता भएको खेल मैदानमा प्रवेश गर्न सबै टिकट बिक्री भइसकेकोपछि टिकटहरूको कालो बजारी समेत भएको खबर विभिन्न समाचार मध्यममा प्रकाशित छ ।
याे पनि पढ्नुस विराट कोहली सबैभन्दा छिटो ९ हजार रन बनाउने पहिलो खेलाडी
त्यस्तो मूल्य १५ देखि १६ हजार डलरसम्म पनि पुगेको हुन सक्नेअमाचार पाकिस्तानी संचार मध्यम जिओ टिभीमा प्रकाशित छ ।
घरेलु टोली नै ‘हुटिङ्’को शिकार
त्यति पाकिस्तान र घरेलु टोली इङ्ल्याण्डबीचको खेलमा समेत मैदानभित्र पाकिस्तानी टोलीका समर्थकहरूको उल्लेख्य बाहुल्य रहेको बताइएको छ । दैनिक भास्करमा प्रकाशित समाचार अनुसार ३ जुनमा भएको उक्त खेलमा पाकिस्तानी दर्शकहरूले इङ्ल्याण्डका फिल्डरहरूलाई निकै हैरान पारिएको समाचार लेखेको छ ।
याे पनि पढ्नुस क्रिकेट विवाद समाधानतर्फ ?
उक्त खेलमा पाकिस्तानले १४ रनले जीत हात पारेको थियो । म्याचको बीचमा पाकिस्तानी फ्यानहरूले इङ्ल्याण्डका खेलाडी क्रिस भोक्सको ध्यान भङ्ग गर्ने प्रयास गरेका थिए । भोक्स्रले उक्त खेलमा ४ क्याच गरिसकेका थिए । म्याचको क्रममा अम्पायर मेरिस इरासमसले अंग्रेज कप्तान जो रुट र अन्य खेलाडीहरूलाई विकेट लिएपछि मनाइने खुसियाली बाउन्ड्री नजिक नमनाउन सल्लाह दिएका थिए ।
त्यसको केही छिनमै जेसन रोयले मोहम्मद हफिजको क्याच छोड्न पुगे । त्यसबेला १४ रन मा खेलिरहेका हफिज्ले ८४ रनको पारी खेले र त्यही पारी पाकिस्तानको जीतका लागि निर्णायक बन्यो ।
याे पनि पढ्नुस १२ वर्षकी छात्रा १० कक्षाको परीक्षा दिँदै !
त्यस्तै ३० जुनमा भारतले पनि घरेलु टोली इङ्ल्याण्डविरुद्ध खेल्दैछ । यस खेलमा पनि मैदानमा ५५ प्रतिशत भारतीय फ्यानहरू रहने भएका छन् । आइसीसीले उपलब्ध गराएको आँकडा अनुसार उक्त म्याचका ५५ प्रतिशत टिकट भारतीय फ्यानले खरिद गरेका छन् भने इङ्ल्याण्डका प्रशंसकहरू ४० देखि ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने बताइन्छ ।
अस्ट्रेलियाविरुद्धको खेलमा पनि भारतीय दर्शकहरूले स्टिभ स्मिथलाई जिस्क्याएका थिए तर भारतीय कप्तान विराट कोहलीले दर्शकहरूलाई उनको स्मिथको खेलको प्रशंसामा ताली बजाउन आग्रह गरेपछि यो प्रकरण चर्चित बनेको थियो ।
ट्याग्स: #cwc2019, Cricket, fans, India, pakistan
मेलम्ची बाढीको कारण पत्ता लगाउन विज्ञसहितको टोली भेम्राथाङ पठाउन गृहमन्त्री खाँडकाे निर्देशन
आज यी स्थामा भारी वर्षा हुने, सतर्कता अपनाउन आग्रह